Mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana - mpisolovava, mpisolovava manokana momba ny - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana - mpisolovava, mpisolovava manokana momba ny
nitatitra ny mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana
Ny isan'ny nahazo fankatoavana manokana momba ny mpisolovava ao Alemaina no mitombo, araka ny antontan'isa avy amin'ny fitondrana Federaly efi-trano ny mpisolovava ny taona isan-taonaTamin'ny taona, dia nisy ny momba ny, tamin'ny. Ihany no tokony ho fito isan-jato ny fifamoivoizana manam-pahaizana manokana ny mpisolovava. Indrindra fa ao ny raharaha ny vitsy, dia zava-dehibe mba hahita ny tsara indrindra manam-pahaizana manokana ny mpisolovava. Fa inona marina no mahatonga ny fifamoivoizana mpisolovava sy ny fomba mpisolovava afaka mahazo izany anaram-boninahitra. Izany, noho izany, nanao fandikan-dalàna ara-panjakana araka ny alemà-dalana fifamoivoizana fitsipika (StVO), amin'ny raharaha, ohatra, ankoatra ny onitra, ny fiara mandrahona ny fandraràna, dia mety tsy manana manam-pahaizana manokana ilay mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana-tanana hanampy. Raha toa ka mihoatra ny hafainganam-pandeha, ny mena fanitsakitsahana ny hazavana na ny tsy firaharahiana ny marina ny fomba fitsipika ao an-dalana ny fifamoivoizana, ny fifamoivoizana mpahay lalàna mahazatra amin'ny zavatra ireo. Nefa ihany koa raha ny amin'ny loza amin'ny fahavoazana ny olona na fananana, azonao atao ny manampy ny mpisolovava na ny mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana.
Ankoatry ny lalana fitaterana ny lalàna, ny rivotra fitaterana ny lalàna, ny lalamby lalàna, ny lalàn ny ranomasina, ary ny rano-dalana tsara ny lalànan'ny fifamoivoizana.
Ny manam-pahaizana manokana ilay mpisolovava noho ny fitaterana dia tsy maintsy ho afaka hijoro ho vavolombelona ny lalàna araka ny faha-efatra ambin'ny folo-ny f ny manam-pahaizana manokana ilay mpisolovava mba (FAO) fa izy dia afaka manome ny Ambany voalaza manokana fahaizany: mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana no mahasoa foana, raha ohatra ianao flashed sy ianao izao dia manana ny fandraràna tsy hamily fiara na fiara mirotsaka mandrahona. Raha tsy fantatrao ny ao amin'ny ara-dalàna teny, avy eo dia, dia afaka ny hanapaka ny fanampiana ara-torohevitra. Eo amin'ny resaka ara-panjakana ny fandikan-dalàna Voakasika dia afaka manao manokana ilay mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana. Ny mpisolovava ny lalànan'ny fifamoivoizana afaka hanampy anao izany raha tsorina dia, raha toa ka te hampiditra, ohatra, ny fitsarana ambony manohitra ny sazy an-tsoratra. Izy dia midika hoe, ankoatra ny zavatra hafa, izay matetika mahazo feno toro-hevitra, ny zavatra tokony hatao, raha izany ohatra, ny filazana ho fahavoazana eo amin'ny zava-nitranga ny loza, na raha misy fiampangana, araka ny lamin ny fahefana, na ny Mpampanoa lalàna. Ny mpisolovava ny fifamoivoizana lalàna fitsapana na tsia sy ny fomba hiatrehana ny fandraràna tsy hamily fiara na tsara toy izany koa ny hevitra tao Flensburg. Izy ireo dia manampy anao nametraka ny tenanao manohitra ny tsy filazana ny ho faty manam-pahefana sy ny lalana iray hafa mpampiasa. Araka ny voalaza etsy ambony, ny Federaly efi-trano ny mpisolovava ao isan-taona, ny antontan'isa ankehitriny mpisolovava isa. Izany dia hita fa, tamin'ny. Na izany aza, afa-tsy hatramin'ny - manomboka amin'ny efa ho efa-jato mpisolovava ao amin'ny faritra - izany specialization ny mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana. Mba ho tonga voalohany ny mpahay lalàna, tsy maintsy tanteraka ny tendrena ho fianarana ny lalàna, izay nahazo anaram-bositra Jurassic. Izany dia ahitana ny sivy Semesters ao amin'ny fototra ny fanadihadiana. Araka ity fitsipika ity, vanim-potoana ny fianarana, ny Mpianatra dia tsy maintsy mandalo ny voalohany-panjakana fandinihana. Izany dia ahitana ny dimy hatramin'ny fito (miankina amin'ny fanjakana) ny mpanoratra ny fanadinana izay ny Fahalalana ny telo lehibe faritra ny lalàna, lalàna mifehy ny heloka bevava, ny lalàna sivily sy ny vahoaka ny lalàna dia nitaky. Ny fanjakana voalohany dia tamin'ny fanadinana, ka ny taona traineeship ao amin'ny fanofanana any ny fitsipika. Eto, ny Mpianatra ny lovia isan-karazany, mba hanangona amin'ny fomba fanao - dia sy ny dingana-mirona ny fahaiza-manao. Ny internship mamarana ny antsoina hoe faharoa-panjakana fandinihana ny faharoa-panjakana fandinihana. Io fandinihana dia mifanohitra amin'ny fanjakana voalohany dia madio-panjakana fandinihana, ataon'ny fanjakana ara-pitsarana birao fanadinana. Taorian'ny faharoa fanjakana fanadinana dia lasa, dia afaka miantso ny diplaoma ho toy ny mendrika tanteraka ny mpisolovava. Noho izany, dia tsy maintsy, araka ny Lalàna fivoriana Federaly efi-trano ny mpisolovava (BRAK), ny ho ny tombontsoan'ny rehetra asa fieken-keloka, manaraka ny toe-javatra manaraka ireto: raha tsy rehefa ireo hevitra ireo no nihaona, dia afaka ho nahazo mpisolovava ny lohateny hoe"manam-pahaizana manokana ilay mpisolovava noho ny fifamoivoizana lalàna"avy amin'ny efi-trano mahay ny mpisolovava.
Ny fidiram-bola ny mpahay lalàna, tsy dia, voalohany, tena amin'ny ankapobeny, misy hevitra mba handinika.
Ny fahamendrehana dia tapa-kevitra, na araka ny filazan'ny mpampanoa lalàna karama lalàna (RVG) na araka ny fandaminana fandoavam-bola (ohatra, ny fotoana sy ny saram-ny fifanarahana). Ny fanekena fanonerana foana fa tsy ara-dalàna ponenana izay azo atao, indrindra raha ny fifanarahana dia ambony kokoa noho ny famerana ny karama. Ankoatra izany, ny mpahay lalàna dia manao kajy ny sandan'ny vola avy ny zavatra manokana ao amin'ny fanontaniana ny raharaha. Lanjany-nanampy ny hetra, dia matetika antsoina hoe VAT, sy ny fikirakirana ny saran'ny dia ampidirina ao ny hanapaka ny sarany.
Toy izany koa ny maro hafa arak'asa vondrona, misy eo amin'ny afa-po ny mpisolovava Traffic dia tena lehibe fahasamihafàna isam-paritra.
Fa tsy ny faritany, fa koa teo anivon ny lalàna orinasa, ny vola mety miovaova be. Ny haben'ny ny lalàna mafy ary koa ny taona sy ny fotoana izay mpisolovava ao ny asa miasa ihany koa ny fepetra manan-danja. Ireo mpisolovava tena tsara karama asa, misy ihany koa ny avo ambaratonga ny andraikitra nomena.
Ny karama ny mpahay lalàna dia mifantoka hatrany am-piandohana.
Rehetra premium faritra sy ny vola miditra ny fizarana ny mahazatra. Ao ny ambony fidiram-bola faritra mpisolovava ho an'ny hetra momba ny lalàna, ny fianakaviana sy ny lalàna ary ny asa lalàna. Ao amin'ireo sehatra ireo ny isan'ny nisoratra anarana mpahay lalàna no ambony indrindra. Lehibe ny lalàna orinasa ao amin'ny faritra manisa hatramin'ny zato mpisolovava, mandritra izany fotoana izany, dia miasa amin'ny orinasa madinika dia tokony ho iray ihany ny dimy mpisolovava. Araka ny lalàna hentitra, ny mpisolovava noho ny fitaterana ny mpiasa, dia matetika ny kely orinasa, ny karama eto eo afovoan'ny ny entana. Midika izany fa mpahay lalàna noho ny lalànan'ny fifamoivoizana ao amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo-salantsalany orinasa isan-taona ny lehibe karama eo amin'ny momba. Euro azo antenaina. Matihanina ny fikambanana amin'ny Ankapobeny, manondro manokana ara-dalàna ny tombontsoan'ny fiaraha-monina, amin'ny solontena iray ny asany, noho ny tombontsoa sy ny fampiroboroboana. Ny fandraisam-peo mifandray amin'ny, matetika no any ara-dalàna ny toe-piainana.
Na dia izany aza, manaraka manaraka ny fitsipika
Amin'ity tranga ity, ny porofon'ny manan-danja professional fiofanana amin'ny asa manokana, izay mifanitsy amin'ny Fikambanana matihanina. Any Alemaina, dia nametraka maro ny Ankapobeny ny fikambanana ho an'ny mpisolovava. Anisan'izany ny zavatra Fikambanan'ny mpisolovava e. (VDA) sy alemana fisotroana Fikambanana, miasa ho an'ny fifanakalozana traikefa sy vaovao, ary koa ny fampiroboroboana sy ny firosoana amin'ny matihanina ny fomba fanao ny mpisolovava.
Ny zavatra fisotroana Fikambanana manolotra ny mpikambana samihafa miara-miasa amin'ny vondrona.
Anisan'izany misy ihany koa, nanomboka ny taona, miasa vondrona fitaterana lalàna, izay ankehitriny ny.
mpisolovava an'i. Ny Fikambanana manome isan-karazany ny fanofanana fepetra, ary koa ny maro ho an'ny sehatra fiadian-kevitra ny fifanakalozana sy ny fametrahana ny fifandraisana. Ankoatra izany, izy koa dia mamoaka tsy tapaka ny gazety ny Fikambanana. Ankoatra izany, dia mijoro hoan'ny zon'ny olona amin'ny loza niharam-boina sy ho an'ny maharitra ny fiarovana ny ara-toekarena mahaliana ny fifamoivoizana lalàna mpahay lalàna miara-miasa. Mandritra izany fotoana izany ny mety ny mpisolovava manokana momba ny fiofanana ho amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana mba ho ao an-alemà mpisolovava ny Fikambanana natsangana. Koa, ny voalaza etsy ambony VDA manana ny Komity mpiaro ny lalànan'ny fifamoivoizana ary mihazona ny mpisolovava manokana momba ny fanofanana. Fa manam-pahaizana manokana ireo mpisolovava fa ny fifamoivoizana ihany koa ny lalàna dia manana fahafahana ho mpikambana ao amin'ny manokana ny fifamoivoizana lalàna manokana professional Fikambanana misy ankoatra ny Ankapobeny ny fikambanana ho an'ny mpisolovava. Ity Fikambanana naorina tamin'ny faramparan'ny taona.
Teo aloha, tsy nisy ny Fikambanana toy izany, misolo tena ny tombontsoan'ny izay manana mpisolovava manokana ao amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana.
Ny tanjon'ny Fikambanana dia, voalohany indrindra, amin'ny alalan'ny gazety sy Fifandraisana amin'ny vahoaka, ary koa amin'ny Endrika fampianarana ny fepetra voalazan'ny ny fifamoivoizana amin'ny ny tsara sy ny rehetra ny mifandray ny zon'olombelona, ary zon'olombelona ny mponina teny. Ankoatra izany, dia ny Fikambanana manan-danja, ny fiaran-dalamby ny mpikambana ao aminy, ao amin'ity tranga ity, noho izany, ny mpisolovava, sy ny mbola hanolotra ny fiofanana ary koa ny fanabeazana dia mitombo. Ity tolotra azo antoka fa mpahay lalàna dia ho afaka ny ho mendrika ny mpanjifa na ny fiantohana solontena, amin'ny ho avy, sy ny toro-hevitra manam-pahaizana manokana. Ny mpikambana dia afaka hividy ny Fikambanana matihanina ankoatry ny fahombiazana eo amin'ny asa manokana teorika sy ny fahalalana azo ampiharina ny isan-karazany certifications. Ny fandraisana anjara amin'ny mazava ho azy fa izany no ilaina raha ny mpisolovava ny mpisolovava manokana momba ny anaram-boninahitra in erlangen te. Noho ny fampidirana ho mpikambana ao amin'ny Fikambanana alemana fifamoivoizana mpisolovava e. ny manaraka ny kely indrindra takiana mampihatra: efa nandray ny fifamoivoizana tao ambadika ary te izao fa manana ny mpisolovava tsara ny lalànan'ny fifamoivoizana ao ny Raharaha. Izany dia matetika tsy mora ny mahita ny tsara mpisolovava. Noho izany, izany dia mety ho ilaina mba hahitana mialoha amin'ny namana, fianakaviana na ny Olom-pantany. Na izany aza, tsy vaovao ihany koa ny mpahay lalàna ao amin'ny efi-trano, izay tonga amin'ny alalan'ny telefaonina, ary hanome anareo vaovao momba ny mpisolovava ao amin'ny faritra nomena. Ankoatra ireo rehetra ireo safidy dia jereo ny tranonkala ny tsirairay lalàna mafy, izay manome vaovao momba ny toetra sy ny maha zava-dehibe ihany koa no mendrika matetika. Na izany aza, amin'ny farany, raha ianao no mipetraka ao amin'ny fakan-kevitra voalohany ao amin'ny birao, dia tokony hanana ny fandinihana akaiky kokoa, ohatra, na ny birao dia madio sy milamina. Ny mpisolovava tsara dia manome anao ny fitakiana ny vaovao na izany ary inona no zavatra niainany izy dia manan-danja ao amin'ny faritra ny lalàna sy afaka manampy anao hanao lava volo rava ny nanameloka ny mpisolovava ny saram ao amin'ny lalana lalànan'ny fifamoivoizana. Amin'ny fotoana izay, misy lalàna orinasa misahana manokana ny lalànan'ny fifamoivoizana. Ankoatra izany, hafa ny lalàna sy ny orinasa, ny mpisolovava, mahazo ny pejy, efa mahazatra ao amin'ny faritra ny fifamoivoizana lalàna, dia toy izany faritra ny lalàna dia mitombo ao amin'ny fangatahana sy ny Ampiasaina. Ao amin'ny Manaraka, dia manome ny kely fifantenana ny lalàna sy ny orinasa tany Alemaina, rehefa mifandray amin'ny lalana lalànan'ny fifamoivoizana. Misaotra noho ny lahatsoratra mahaliana.
Mieritreritra aho fa ny lalàna faritra mpisolovava noho ny lalànan'ny fifamoivoizana no tena olana sarotra.
Amin'ny tsara indrindra ao amin'ny raharaha iray, dia tokony hiverina eto mpisolovava.
Rariny Wiener Neustadt
Маалымат Бернд Адвокаттар